နာမည်တူမရှား လူတူမရှားဆိုသလိုပါပဲ ။ သွေးမတော်သားမစပ်ပေမယ့် ရုပ်ရည်ချင်းဆင်တူနေတဲ့သူတွေ လောကမှာ ရှိနေပါတယ် ။ သာမန်လူတွေကို သတိထားမိချင်မှထားမိမှာပေမယ့် ... နိုင်ငံကျော်ဆယ်လီတွေတူနေရင်တော့ ပရိတ်သတ်က ချက်ချင်းကိုသတိထားမိတော့တာပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း အဆိုတော် XBox နဲ့ Beauty Blogger နေခြည်ဦး တို့ကို တူတယ်လို့ လူပြောအတော်များနေတာပါ ။ ဒီလိုပဲ မောင်နှမတွေလို့ထင်ရလောက်တဲ့ ကိုရီးယား Idol တွေလည်းရှိနေပါတယ် ။ သေသေချာချာကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကွဲပြားသွားမှာပေမယ့် ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ခပ်ဆင်ဆင် မျက်နှာမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယား အနုပညာရှင် အယောက် ၂၀ ကို ကိုရီးယား media တစ်ခုကနေ စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ် ။ သူတို့တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေကြား နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ ... အဆိုတော်တွေ သရုပ်ဆောင်တွေ အများအပြားပါဝင်ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေလဲ ... ဘယ်နေရာတွေ တူကြတာလဲ ကြည့်ကြရအောင်နော် ...
1. EXO’s Suho and Red Velvet’s Irene
2.EXO’s Xiumin and Big Bang's G-Dragon
3. Girls’ Generation’s Yoona and f(x)’s Krystal
4. Jessica and GFRIEND’s SinB
5. Girl’s Day’s Hyeri and LABOUM’s Solbin
6. Super Junior’s Heechul and SEVENTEEN’s Jun
7. JYJ’s Jaejoong and NCT’s Taeyong
8. BTS’s Jin and BLACKPINK’s Jisoo
9. BIGBANG’s G-Dragon and Girl’s Day’s Minah
10. DIA’s Jooeun and Red Velvet’s Joy
11. EXO’s Chanyeol and Oh My Girl’s Binnie
12. Apink’s Naeun and BLACKPINK’s Jennie
13. VIXX’s N and BtoB’s Sungjae
14. Rain and 2PM’s Junho
15. 15&’s Yerin and BLACKPINK’s Rosé
16. Stellar’s Hyoeun and Pristin’s Nayoung
17. iKON’s B.I and Monsta X’s I.M
18. BTS’s Suga and SEVENTEEN’s Woozi
19. Apink’s Chorong and Cosmic Girls’s Exy
20. JYJ’s Junsu and Highlight’s Yoseob
နှစ်ဖက်စလုံးကို သက်သက်စီမြင်ဖူးနေပေမယ့် ခုလို တွဲကြည့်လိုက်တော့လည်း တကယ်ကို တူနေပါလေရော ... ဘယ်အတွဲက အတူဆုံးလို့ ထင်လဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ...